မကြေးမုံ၏ တွေးမိသမျှ: December 2008
အညာမှာနေတုန်းက ရိုက်ထားတဲ့ပုံလေးတွေ ပြန်တင်လိုက်ပါတယ်။မျက်စိနောက်တယ်ဆိုရင်တော့ ခွင့်လွှတ်ကြပါလေ...။
ဒီတစ်ခါ နောက်ဆုံးတင်ခြင်းပါ...။ဘာဖန်တီးမှုမှ မပါတဲ့ကျမရဲ့ ကင်မရာစုတ်စုတ်လေးနဲ့ရိုက်ခဲ့တဲ့ ဓာတ်ပုံတွေပါ...။
ရွာတစ်ရွာကနေ နောက်တစ်ရွာကိုကူးတိုင်း ဒီလိုအပင်တွေနဲ့ပြည့်နေတဲ့ ကွင်းပြင်ကြီးကိုဖြတ်ရတယ်..။ကျမလဲ ဘယ်ရမလဲ။ကိုအငဲရဲ့ "ဒီကွင်းပြင်ကြီးကို...တို့ဖြတ်ဖူးတယ်....ဒီမြက်ပင်စိမ်းတွေ..ခြောက်သွေ့ကာ ညိုမွဲနေ..ဒီကောင်းကင်ကြီးလဲ ဟိုအရင်လို မလှတော့ဘူး..." လို့အော်ဆိုပြီး နွားလှည်းစီးခဲ့တာပေါ့..။
အဲ့ဒိအချိန်တုန်းကသာ တစ်ကိုယ်လုံးနာကျင်ကိုက်ခဲနေလို့ စိတ်ပင်ပန်းခဲ့ရတာ..ခုပြန်တွေးတော့ လွမ်းမောစရာ..:'(
ဒီပုံကိုကျတော့ ကျမဆရာက ရှေ့ကနေရိုက်သွားတယ်..။ကျမက သူ့အိုင်ဒီယာကို ကောင်းမလားထင်ပြီး လိုက်ရိုက်ထားလိုက်တာ..။
ဒီပုံကျတော့လဲ အလင်းရောင်နဲ့ မြတ်စွာဘုရားရဲ့ သင်္ကန်းအရောင်တွေကို ဟပ်နေတယ်လို့ ခံစားရလို့ ရိုက်ခဲ့ပါတယ်..။
(အဟဲ အရောင်တွေ အကြောင်းပြောနေတော့ ပန်းချီတွေဘာတွေ နားလည်လားလို့ အထင်မကြီးလိုက်နဲ့ဦးနော်။မျဉ်းတောင်ဖြောင့်အောင် မဆွဲတတ်ပါဘူး )
ပုဂံဘုရားတစ်ဆူထဲက နံရံဆေးရေးပန်းချီတစ်ခုပါ။ဘုရားနာမည်တော့ မမှတ်မိတော့တာ ခွင့်လွှတ်နော်...:)
ဒီဓာတ်ပုံကို ကျမဘာသာကျမ တံတိုင်းကြီးလို့ နာမည်ပေးထားတယ်..။
posted by mirror time 1:38 PM 11 comments
ပြောခဲ့ဖူးသလို ချစ်တတ်တဲ့ရင်ခွင်အကျယ်ကြီးနှင့်လူဆိုတော့ စိတ်ကူးကလဲ အလွန်ကိုယဉ်ပါသည်။ အင်္ဂလိပ် စကားပုံလား၊ အဆိုအမိန့်လား မသိ.. ကြားဖူးတာတောင်ရှိသည်။ " အိပ်မက်တွေကို မက်ပါ..တနေ့မှာ အိပ်မက်တွေက သင်သွားလိုရာကို ရောက်တဲ့အထိခေါ်ဆောင်သွားပါလိမ့်မယ်" ..တဲ့လေ..။
ဒီတော့ အလကားဖောချင်းသောချင်းရနိုင်တဲ့ ဒီစိတ်ကူးအ်ိပ်မက်တွေ ဘာလို့ မမက်ရဲရမှာလဲ....။
စိတ်ကူးယဉ်တတ်တဲ့အရွယ်ကတည်းက မက်ခဲ့တဲ့စိတ်ကူးအိပ်မက်...ခုထိလဲ မက်ဆဲပါပဲ။ဆက်ပြီးလဲ မက်နေမိဦးမှာပါပဲ။
စိတ်ကူးအိပ်မက်များ အများအပြားရှိပါတယ်။ သို့သော် အဲ့များလှတဲ့ စိတ်ကူးအိပ်မက် ကို အကောင် အထည်
ဖေါ်ဖို့ရာ လမ်းကြောင်းပေါင်းများစွာနဲ့ လျှောက်လှမ်းမှ ဖြစ်နိုင်မယ်လို့လဲ ယုံကြည်ထားပါတယ်။ ကျမစိတ်ကူးလေးတွေကို တစ်ခုချင်းစီ ချရေးကြည့်ပါ့မယ်။ ဖြစ်နိုင်၏၊ မဖြစ်နိုင်၏ ၀ိုင်းပြီးစဉ်းစားပေးကြပါဦး။
၁ ) နယ်ပြန်ပြီး အမေနဲ့နေဖို့...
အငယ်ဆုံးသမီးကို အမြဲတမ်း ရင်ခွင်ထဲ ထည့်ထားပြီးနေချင်တဲ့ ကျမအမေရဲ့ဆန္ဒတွေကို ဖြည့်ဆီးပေးဖို့ ဒါက ကျမအတွက် လက်တွေ့အကျဆုံး အိပ်မက်တစ်ခုပါပဲ။ အမေအသက်က ခုဆို ၆၀။ ခုလာမယ့် ပြာသိုလထဲမှာ ပြည့်ပါပြီ။ ဆိုတော့ အမေ့အသက် ၇၀ ဆိုရင်တောင် ကျမဒီအခွင့်အရေးကို ရနိုင်ပါ့မလား မသေချာသော်လည်း တစ်နေ့ဖြစ်ကိုဖြစ်လာရမယ်လို့ အမြဲအိပ်မက်မက်ပါတယ်။
အမေနဲ့အတူ ခြံစိုက်စားကြမယ်။ ခုလို ဆောင်းတွင်းဆိုရင် မေမြို့၊ဂန္ဒမာ နဲ့ ဂေါ်ဖီပန်းတွေနဲ့ ကျမတို့ရဲ့ အိမ်နောက်ဖေး ဈေးဆိုင်လေးက စည်ပင်နေမှာပဲ...။ အပင်တွေကို ရေလောင်းဖို့ အတွက် ရေတင်စက်လေးတစ်လုံးဝယ်မယ်။ ပြီးရင် ရေပိုက်နဲ့ပဲ ရေဖြန်းမယ်...။ခုလို ပုံးနဲ့ထမ်းပြီးရေလောင်းစရာ မလိုတော့ဘူးပေါ့။ကျမတို့အိမ်နောက်ဖေးက ချောင်းထဲမှာ နေ့တိုင်းရေဆင်းချိုးမယ်။အသားတွေမဲလဲ မဲပါစေ၊ဆံပင်တွေနီလဲ နီပါစေ။ရေချိုးရင်း ငါးတွေဖမ်းမယ်၊ငှက်ပျောတုန်းနဲ့ နွံတွေကို ကမ်းစပ်ထိ တွန်းတင်ပြီး အဲ့ဒိနွံထဲမှာ လျှောက်ပြေးနေတဲ့ ငါးတွေကိုဖမ်းမယ်...။အဲ့ဒိအခါ အမေက ဟဲ့မိ...ရေ...နင်ခုလာခဲ့စမ်းလို့ အော်ခေါ်လိမ့်မယ်။အော်ခေါ်တဲ့ အခါကျမှ ပြေးလွှားပြီ ကုန်းပေါ်ကိုတက်မယ်...။
အိမ်ပေါ်ရောက်တော့မှ ရေအသန့်နဲ့ တစ်ထပ်ချိုးပြီးတော့မှ အမေချက်ထားတဲ့ ငါးဖြူလေးချက်၊ငါးမီးဖုတ်နဲ့ ငြုပ်သီးစိမ်းထောင်းဖျော်ထားတဲ့ ငါးပိချက်နဲ့ ဘူးရွက်ပြုတ်တို့စရာနဲ့ ထမင်းစားမယ်...။ကျမရှာလို့ရလာတဲ့ ငါးလေးတွေကိုတော့ အမေမသိအောင် အိမ်ရှေ့ အိမ်ကိုပေးလိုက်ပြီးပေ့ါ....။
အဲ့လို သာမာန်ရိုးကျဆန်တဲ့ဘ၀လေးထဲမှာ ကျမဖြတ်သန်းပြီး ကျမရဲ့ အချိန်တွေကိုကုန်ဆုံးချင်တယ်....။
၂ ) ကျမမြို့မှာ အကျိုးပြု သင်တန်းလေးဖွင့်ဖို့ နဲ့ စာကြည့်တိုက်လေးတစ်ခုတည်ထောင်ဖို့.....
ဒီစိတ်ကူးကလဲ အမြဲမက်တဲ့အိပ်မက်ပါ...။အထူးသဖြင့် နယ်ပြန်ပြီးရင် ပိုပြီးဒီစိတ်ကူးက ပြင်းထန်လာတတ်ပါတယ်။
ကျမတို့ မြို့ဟာ ခရီးလမ်းဆုံးမြို့ဖြစ်သလို ဘာမှလဲ သိသာမြင်သာတဲ့ တိုးတက်မှုမရှိပဲ လူတွေအားလုံးသည်လဲ တို့လူလေးများဆိုသလေ............ဝေလေလေ...သို့မဟုတ်...ခင်ညာာာာာာာာ.....ဆိုတဲ့လူတွေနဲ့ပေါ့။
ကျမအဲ့မြို့လေးမှာ ဘာသာစကားသင်တန်း၊ကွန်ပြူတာသင်တန်းနဲ့ စာကြည့်တိုက်လေးတစ်ခုဖွင့်ချင်တယ်...။
ကျမစိတ်ကူးထဲက ဘာသာစကားသင်တန်းမှာ တစ်ပတ်နှစ်ရက်မှာ ရန်ကုန်ကနေအလကားလာသင်ပေးမယ့် သူငယ်ချင်းရဲ့ အင်္ဂလိပ်စာသင်တန်း၊နောက် ကျမရဲ့ မြန်မာစာသင်တန်းလေးတွေ လုပ်မယ်...။တန်ရာတန်ကြေးလဲ တောင်းမယ်...။
ရလာတဲ့ ငွေနဲ့ ကျမရဲ့စာကြည့်တိုက်မှာ စာအုပ်တွေဝယ်ဖြည့်မယ်...။ရန်ကုန်ကို စာအုပ်တွေလှမ်းမှာမယ်...။
ကွန်ပြူတာသင်တန်းမှာကျတော့ အဲ့ဒိအချိန်ဆို အင်တာနက်တွေ၊ဘာတွေလဲချိတ်ဆက်လို့ရနေလောက်ပြီ ဆိုတော့ကျမကလေးတွေကို ဂျာဗားတွေဘာတွေကအစ နည်းပညာနဲ့ပတ်သက်တာ အကုန်သင်ပေးမယ်...။ဒါသင်ဖို့အတွက်တော့ သင်တန်းဆရာရှာရဦးမယ်..။ကျွမ်းကျင်သူများ ကျမအိပ်မက်တွေ အကောင်အထည်ဖော်တဲ့အခါ ပါဝင်ဖို့ ခုထဲကဆက်သွယ်နိုင်ပါတယ်...။
ကျမစာကြည့်တိုက်လေးမှာကျတော့ ကျမတုန်းက အသက်အရွယ်အလိုက် မဖတ်ခဲ့ရတဲ့စာတွေကို ကျမ Librarian တွေဖတ်နိုင်အောင် စီစဉ်ထားမယ်...။ကျမစာကြည့်တိုက်မှာ ငှားလဲငှားနိုင်သလို ထိုင်မြည်းလဲလုပ်လို့ရအောင် စီစဉ်ထားမယ်..။စိုစွတ်ပြီး အပင်ပေါတဲ့အရပ်ဖြစ်တာမို့ ခြံအကျယ်ကြီးထဲမှာ အပင်မျိုးစုံစိုက်ထားဦးမယ်...။အပင်စိုက်တာ ၀ါသနာပါတဲ့ ကျမအစ်မငယ်က အဲ့ဒါကိုလုပ်ပေးနိုင်မယ်လို့ မျှော်လင့်တယ်...။ကျမကို ဝေဖန်မယ့်သူတွေကိုလဲ အလုပ်နဲ့သက်သေပြဖို့ စဉ်းစားထားတယ်...။ကျမရဲ့ နယ်မြို့က သယ်၇င်းတွေကတော့ နင်တော်တော်ကြောင်တာပဲလို့ ပြောကြလိမ့်မယ်..။သူတို့တွေကိုလဲ သိမ်းသွင်းမနေပါဘူး..။။ကိုယ့်လမ်းကိုယ်ဆက်လျှောက်မယ်...။
၃ ) ကျမထက်ပိုတော်တဲ့..၊သို့မဟုတ် လူ့ပတ်ဝန်းကျင်ကို ကောင်းကျိုးပြုနိုင်တဲ့ ကျမရဲ့ မျိုးဆက်သစ်တွေမွေးထုတ်ဖို့....
ကျမအမေထက် ကျမတော်တယ်၊ပိုအသုံးကျတယ်လို့ ဘယ်တုန်းကမှ မခံယူခဲ့ဘူး..။ဒါမဲ့ ကျမရင်သွေးတွေကျရင်တော့ ကျမထက်ပိုတော်ပြီး လူ့လောကပတ်ဝန်းကျင်အတွက် အထောက်အကူပြုမယ့် လူငယ်လေးတွေဖြစ်စေချင်ပါတယ်..။
ဖြစ်အောင်လဲ ကျမကြိုးစားထောက်ပံ့နိုင်လိမ့်မယ်လို့ ယုံကြည်တယ်...။ကျမရင်သွေးလေးတွေက အမှီခိုကင်းကင်းနဲ့ ဘ၀မှာရပ်တည်နိုင်ရမယ်..။အမျိုး၊ဘာသာ၊သာသနာကို ချစ်တတ်ရမယ်...။အမှားနဲ့ အမှန်ကို ကိုယ်ပိုင်ဥာဏ်နဲ့ ဝေဖန်ပိုင်းခြားနိုင်ရမယ်..။အဲ့ဒိလို ရင်သွေးလေးတွေနဲ့ ကျမရဲ့နောက်ဆုံးအချိန်တွေကို ကုန်ဆုံးချင်တယ်...။
သည်းခံဖတ်ပေးကြတဲ့ မောင်နှမများအားလုံးစိတ်ကူးအိပ်မက်များကို အကောင်အထည်ဖော်နိုင်ကြပါစေ...။
ကျမစိတ်ကုးတွေကို ဖတ်ပြီးရင် အစ်ကိုတို့အစ်မတို့လဲ ရေးပေးရမယ်နော်...။
ကိုအောင်သာငယ်(သူပဲအမြဲတဂ်နေတာ..ဒီတစ်ခါ ညီမတဂ်တာ ဖြေ...:) )
ကိုငြိမ်းစု (ဘယ်တုန်းကမှ မဖြေ..သို့သော် ၀ါသနာအရ တဂ်ပါသည်)
အစ်ကို ဖိုးညို(ပထမဆုံးနဲ့ အခါအခွင့်သင့်တုန်း ရေးပေးမယ်လို့ မျှော်လင့်ပါတယ်..။)
မောင်ရှင်းသန့် (အစ်မကြီးပဲလေ အနိုင်ကျင့်ရမှာပေါ့)
အစ်မ ယောနသံ (အစ်မကြီး ဒုတိယံပိနော)
အစ်မပန် (အစ်မသာ ဖြေရင် ညီမတကယ်ဝမ်းသာမှာ)
အစ်မကေ (ခင်တယ်ဆို ဖြေပေးနော် အစ်မ )
posted by mirror time 6:25 PM9comments
ဘာမှလုပ်မရတဲ့အကြောင်းနဲ့ အရည်ညှစ်ထုတ်ထားခဲ့သော ပိုစ့်ပေါင်း ၈၀
ကျော်မရ၊ခွမရ ဖြစ်နေပါတယ်။ကျမတစ်ယောက်ထဲများ ဖြစ်နေလားမခန့်မှန်းတတ်ပါ။တစ်ခါတစ်လေ ပြတင်းပေါက်လေးက ပွင့်နေပြီး ဘာမှလုပ်လို့ မရပါ။အလကား!! လူကိုလာလိမ်နေတယ်။စာတွေလိုက်ဖတ်ပြီးလို့ ထင်ရာမြင်ရာလေးရေးမယ်ကြံလဲ 10 အိမ်ကို တစ်အိမ်တောင် အဆင်မပြေဘူး။ကြာတယ်...ခါးချည့်တယ်။ဇက်ကြောတက်တယ်။မျက်မှန်ပါဝါတိုးတယ်။
ပိုစ့် 80 မြောက်ကို ဒီအရည်မရ၊အဖတ်မရအကြောင်းကိုပဲ အရည်ညှစ်ပြီးရေးတင်လိုက်မယ်။
အားလုံး သည်းခံပြီးဖတ်ပေးလို့ ကျေးဇူးပါ။
posted by mirror time 9:45 PM4comments
ဒီနေ့ တစ်နေ့လုံး အချစ်အကြောင်းစဉ်းစားမိနေသည်။
အချစ်အကြောင်းဆိုတော့ အချစ်ဆိုတဲ့ကောင်မလေး သို့မဟုတ် ကောင်လေးအကြောင်းလို့တော့ မထင်လိုက်ပါနှင့်။
လူတို့ အင်မတန်ဖောဖောသီသီအသုံးများသလောက်၊လူတို့ ပြောချင်သလိုပြော၊သတ်မှတ်ချင်သလို သတ်မှတ်ခံနေရသောစိတ္တဇနာမ် အချစ်အကြောင်းသာဖြစ်ပါသည်။
စဉ်းစားဖြစ်တယ်ဆိုတော့ ကျမအသက်ဆယ့်သုံးနှစ်ဆိုတဲ့ သီချင်းထဲကလို မှန်ရှေ့ထိုင်ကာတခိုးခိုးတစ်ခစ်ခစ်ရယ်ပြီးတော့ စဉ်းစားနေတာမျိုးလဲ မဟုတ်ရပါ။
ကိုအောင်သာငယ်ကြီးတဂ်တုန်းက အချစ်အကြောင်းကိုသေချာ ရေးမပေးလိုက်ရ၊မရေးတတ်တာလဲ ပါပါသည်။
နောက်တစ်ချက်မှာ ကိုယ့်အချစ်ကြောင့် သူတပါးကို စိတ်ကသိကအောက်ဖြစ်ရလောက်အောင်ထိ လိုက်လံနှောက်ယှက်တတ်သော ယောက်ျား၊မိန်းမတို့ကို နားမလည်နိုင်ခြင်းကြောင့်လဲဖြစ်ပါသည်။
တကယ်စဉ်းစားတော့မှ ဒီကိစ္စကအင်မတန်လေးနက်ပြီး အလွန်တရာအဖြေရှာရခက်ပါသည်။
တနည်းအားဖြင့် ချစ်တတ်သောနှလုံးသားအကြီးကြီးနှင့် အချစ်တို့နဲ့ပြည့်သော ရင်ခွင်အကျယ်ကြီးကိုိ ပိုင်ဆိုင်ထားသူဖြစ်ပါသည်။ချစ်စရာ ကောင်းတာမှန်သမျှကို အကုန်ချစ်ပါသည်။
အချစ်အကြောင်း စဉ်းစားရင်းကပဲ သူနဲ့နံရံပါးပါးလေးတစ်ခုသာခြားပြီး လုံးဝဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်သော
အမုန်းအကြောင်းထဲကိုပါ စိတ်ရေယာဉ်ကိုမျှောနေမိခဲ့ပါသည်။ရိုးသားပွင့်လင်းစွာ ပြောရရင်အမုန်းတရာဆိုတာကို လူပေါ်လူညွန့်ခူးစားတဲ့လူတွေလောက်ကလွဲရင် ကျန်တဲ့၊အခြားသော ဘယ်နေရာ၊ဘယ်အသိုင်းအ၀ိုင်း၊ဘယ်လူတန်းစားပေါ်တွင်မှ အမုန်းတရားဟူသည်ကို သိပ်ချစ်တတ်သောကျမ မထားတတ်ပါ။
ထားလဲမထားနိုင်ပါ။တကယ်တမ်းကျတော့ အမုန်းတရားသည် မုန်းရသူကိုပါ ပူလောင်စေသည်မဟုတ်လား။ဒီလိုဆိုတော့ အချစ်အကြောင်းလေးပြန်လှည့်မိသည်။
အချစ်ဆိုတာကရော ပကတိငြိမ်းချမ်းမှုကို ပေးစွမ်းနိုင်ပါသလား။ကာလရှည်ကြာစွာ ပေးနိုင်လိမ့်မည်မထင်ပါ။အချိန်အတိုင်းအတာတစ်ခုထိတော့ ပေးကောင်းပေးနိုင်ပါလိမ့်မည်။သို့သော် အဲ့သည်အချိန်အတိုင်းအတာဆိုတာကို ဒါက ငြိမ်းချမ်းမှုလို့ နာမည်တပ်လို့မရစကောင်းပါ။သို့သော် အချစ်ရှိနေတဲ့ဘ၀၊အချစ်ရှိနေတဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်၊အချစ်နဲ့ဖြန့်ကျက်တဲ့ ကောင်းကင်အောက်မှာ နေရတဲ့တတင်္ဂအခိုက်အတန့်မှာတော့ ငြိမ်းချမ်းမှုဆိုတာကို အပြည့်အ၀မရခဲ့ရင်တောင် အမုန်းတရားရဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်ထက်တော့ အေးမြမှာ အမှန်ပါပဲလေ။
ဒါဆို အချစ်ကြောင့်ပူလောင်ရတာတွေလဲ ထည့်စဉ်းစားဖို့မလိုဘူးလား။သိပ်လိုတာပေါ့နော်။
အဲ့ဒိ အချစ်ကြောင့်ပူလောင်တယ်ဆိုတဲ့ ကိစ္စကို ခင်ဗျားတို့ရော ဘယ်လိုအနက်ဖွင့်ဆိုချင်ပါသလဲ။
တကယ်ချစ်ရင် ပူလောင်ရပါသတဲ့လား။အချစ်ကြောင့်ပူလောင်ခြင်း မဟုတ်တန်ဘူး။အဲ့ဒိပူလောင်မှုသည် အတ္တ၏ အသီးအပွင့်ပင်ဖြစ်ပါလိမ့်မည်။အချစ်ကြောင့် မပူလောင်ပါ။အချစ်သည် ပျော်ရွှင်မှု၊နူးညံ့မှု၊နှစ်သက်မြတ်နိုးမှု အဲ့သည်တစ်ခုခုကိုသာလျင်ပေးနိုင်စွမ်းသော စိတ္တဇနာမ်တစ်ခုဖြစ်ပါသည်။
အချစ်ကြောင့်ပူလောင်ရပြီဆိုရင်တော့ ကိုယ်တိုင်နဲ့ ကိုယ့်ဝန်းကျင်ကို ပြန်လည်ဆန်းစစ်ဖို့ လိုလာပြီဟု ထင်သည်။အချစ်ကြောင့်ပူုဆွေးသောက ရောက်ရတာ၊အချစ်ကြောင့် ဘ၀ပျက်တာ၊အချစ်ကြောင့် ကိုယ့်ကိုယ်ကိုတိုက်စားခံတာ၊
အချစ်ကြောင့် မူးတာ၊အချစ်ကြောင့် ရူုးတာ၊အချစ်ကြောင့် ဘာကိုမှအမှားအမှန်မခွဲခြားနိုင်တော့တာ၊
တကယ်တော့ အချစ်က ဘယ်လိုပူလောင်မှုမျိုးကိုမှမလုပ်တတ်၊မဖန်တီးတတ်ပါ။ဖန်တီးသူသည် ကိုယ်တိုင်သာလျှင်ဖြစ်ပါသည်။
အကယ်လို့များ အဲ့ဒိအချစ်ဆိုတာက သက်ရှိသတ္တ၀ါတစ်ယောက်သာဆိုခဲ့ရင် အချစ်ကြောင့်လို့နာမည်တပ်ပြီး ကိုယ့်ကိုယ်ကိုဖျက်ဆီးနေကြသူတွေကို အပြစ်တင်နေပါလိမ့်မည်။
(မှတ်ချက်...။အမိမြန်မာပြည်မှာတော့ အဲ့လိုအပြစ်တင်ခံရသူတွေ ဒုနဲ့ဒေးရှိနေကြလိမ့်မည်ဟု ကျမရဲရဲကြီးယုံကြည်ပါသည်)
အချုပ်ဆိုရလျင် အချစ်ဆိုတာ ချစ်တတ်ဖို့သာလိုပါသည်။
posted by mirror time 6:03 PM 10 comments
သီချင်းတွေကို ခြောက်သွေ့စေတဲ့ စိတ်ရဲ့တစ္ဆေ
ကြောက်ရွံ့ခြင်းများနဲ့ မလင်းတဲ့ ညတွေ
အိပ်ရေးပျက်ညတွေကို အဖော်လုပ်ပြီးကုန်ဆုံးရတဲ့ အမှောင်ကမ္ဘာ
အဲ့ဒိ အထီးကျန်ခြင်းကို သိပ်...မုန်း...တယ်...။
posted by mirror time 2:55 PM7comments
လေတဖြူးဖြူးတိုက်နေတဲ့ လမ်းဆုံလမ်းခွမီးပွိုင့်နားက အုတ်ခုံပုလေးတွေပေါ်မှာ ကျမသွားထိုင်ကြည့်ချင်တယ်။ပြီးတော့ဘေးနားကမြက်ပင်ငုတ်စိလေးတွေကို တို့ထိကြည့်ချင်တယ်။
မာကျူရီမီးလုံးတွေနဲ့ လင်းနေတဲ့ ဂုံးတံတားကြီးပေါ်မှာ တစ်ယောက်ထဲ အေးအေးလူလူလမ်းလျှောက်ကြည့်ချင်တယ်။
ကျမထက် သုံးလေးငါးဆမြင့်တဲ့ Billboard ကြီးတွေရဲ့ အောက်မှာမတ်တပ်ရပ်ပြီး တမေ့တမော့ငေးကြည့်ချင်တယ်။
ညဘက်၊လသာသာနဲ့ ကတ္တရာလမ်းမပေါ်မှာ တစ်ယောက်ထဲ အတွေးတွေကို တစ်စချင်းသီပစ်လိုက်ချင်တယ်။
သီချင်းတအေးအေးနဲ့ လက်ဘက်ရည်ဆိုင်မှာ ဆေးလိပ်တစ်လိပ်နဲ့ တစ်ယောက်ထဲထိုင်ပြီး လမ်းမပေါ်ကအမောတွေ၊အပျော်တွေ၊အဇျတ္တတွေကို ငေးကြည့်နေချင်တယ်။ပြီးတော့ အဲ့ဒါတွေကိုကျမစာရေးကြည့်ချင်တယ်။
ကျမ အရက်ဆိုင်ထဲမှာ အရက်သောက်ရင်း စကားတွေဖောင်ဖောင်၊ဖောင်ဖောင်နဲ့ ပြောကြည့်ဖူးချင်တယ်။နောက်ပြီးတော့ မခိုင်တခိုင်၊ယိုင်တိုင်တိုင်ခြေလှမ်းတွေနဲ့ ရပ်ကွက်ထဲကို ပြန်လာကြည့်ချင်တယ်။
ကျမ ဝေးလံခေါင်ဖျားတဲ့ အရပ်ဒေသတွေကို တစ်ယောက်ထဲသွားကြည့်ချင်တယ်။စိတ်အေးလက်အေး ဓာတ်ပုံတွေတစ်လှေကြီးရိုက်ပစ်လိုက်ချင်တယ်။
ကျမ မရေရာတဲ့ခြေလှမ်းတွေကို တွန့်ခေါက်သိမ်းလိုက်ပြီး အမေနဲ့အတူပြန်နေချင်တယ်။အမေချက်ကျွေးတဲ့ ငါးဟင်းမျိုးစုံကို စားပစ်လိုက်ချင်တယ်။ည ည အမေ့ဘုရားရှိခိုးသံနဲ့အတူ အိပ်ယာဝင်ချင်တယ်။
posted by mirror time 9:49 PM7comments
ဒီရက်ထဲ ဘာစာမှမရေးဖြစ်ပါ။စိတ်ပါဝင်စားမှုလဲ အားမကောင်းသလို၊တခြားသော ပတ်ဝန်းကျင်အခြေအနေကလဲ အဆင်မပြေလှပါ။ဒီကြားထဲ တစ်ချက်၊တစ်ချက်ကြားရတဲ့ ပဋိပက္ခလေးတွေကလဲ စိတ်ထဲမယ် ကသိကအောက်ဖြစ်ရသည်။စင်ပေါ်ကလူတွေကတော့ ဘယ်သို့ခံစားလေမယ်မသိ၊သို့သော် ခုမှ ဒီပတ်ဝန်းကျင်သို့ရောက်တာ လသားအရွယ်ပဲရှိသေးတဲ့ ကျမအတွက်တော့ ဒါကထိတ်လန့်စရာတစ်ခုပဲ။တစ်ယောက်ထဲ ကိုယ့်ဘာသာကိုယ် တွေး၊ထင်၊ကောက်ချက်ဆွဲပီး ဒီသံသရာထဲဝဲနေမိတယ်ဆိုပါတော့လေ။
နောက်ထပ်တစ်ခုရှိပါသေးသည်။ဒါကတော့ ကျမရဲ့ရှေ့ဆက်မယ့် လမ်းကိုစဉ်းစားနေခြင်းပါပဲ။
ကိုငှက်ရဲ့ သီချင်းတစ်ပုဒ်လိုသာပ။၀ါသနာထက် ကိုယ်(အို)၀မ်းရေးခက်ပီ၊ဒီသီချင်းဟာ ငါ့ရဲ့နောက်ဆုံး သီချင်းဖြစ်ရင် ဖြစ်မယ်...။
ဆိုသလိုပေါ့။ကျမလဲ ၀မ်းရေးအတွက် အထုပ်လေးတွေထုပ်ချေမှ ဖြစ်တော့မယ်လို့တွေးမိပါသည်။ဒါကြောင့် အထုပ်ကလေးတွေထုပ်နေတုန်းမှာ ကျမရဲ့ ရေးချင်သလိုရေးထားသော စာများလဲကျဲနေပါမယ်။အစ်ကို၊အစ်မ၊မောင်နှမများဆီလဲ အလည်ရောက်ဖို့ နှေးနေပါဦးမယ်...။ဒါပေမယ့် အားလုံးကို အားမနာတမ်းဆိုးရ၊ပြောရရင်ဖြင့် ကျမဆီကိုတော့ မကြာမကြာလာလည်မယ်လို့ မျှော်လင့်နေကြောင်းပါ။
posted by mirror time 6:48 PM3comments
6 နာရီလာ၊၆ နာရီပြတ်ဆိုတာက ဒီဇင်ဘာ ၆ ကနေ၊လကုန်ထိပဲ ဆိုပဲ။ဂျာနယ်တစ်ခုထဲမှာ ဖတ်လိုက်ရတာလေ၊
ဒါဆို ဒီဇင်ဘာ နောက်ပိုင်းကတော့ ဘယ်လိုတွေဆက်ဖြစ်မယ်မသိ....:P
posted by mirror time 10:30 PM6comments
ကျမနဲ့ သူနဲ့ သာမာန်ရိုးကျဆန်စွာပဲ တွေ့ဆုံခဲ့ကြခြင်းဖြစ်ပါသည်။
သာမာန်ရုိုးကျလို့ ကျမပြောရသည်မှာ သာမာန်လူတွေလိုပဲ သူလိုငါလို တက္ကသိုလ်တက်၊တိုက်ခန်းငှားနေ..၊အိမ်ကိုလွမ်း အဲ့လိုဘ၀ကို ပျော်ပျော်ကြီးပုံမှန်လေးနဲ့ ကျမဖြတ်သန်းနေခဲ့တဲ့ အချိန်မှာ တခြားသူတွေနဲ့ ဆုံတွေ့သလိုပဲ သူနဲ့ကျမတွေ့ခဲ့ကြပါသည်။အဲ့ဒိအချိန်သည် လွန်ခဲ့တဲ့ ၅ နှစ်ကျော်ကဖြစ်ပါသည်။သို့သော် သူနဲ့ကျမသည် ဘယ်အချိန်မှာဘာတွေဆက်ဖြစ်လာမယ်ဆိုတာ သေချာမသိသေးပေမယ့် တခြားသော သာမာန်ရိုးကျသူငယ်ချင်းတွေထက်စာရင်တော့ ခုထိအတူတူရှိနေတာကိုကပဲ ကျမကံကောင်းတယ်လို့ပဲ ကျမယုံပါသည်။
ကျမတို့သည် သူများသူငယ်ချင်းတွေလို အ၀တ်ဆင်တူဝတ်၊ဖိနပ်ဆင်တူစီး၊ဆွဲခြင်းတောင်ဆင်တူကိုင်ပြီး ကိုယ်တွေရဲ့ခင်မင်မှုကို ပြသခဲ့ကြသူများလဲမဟုတ်ပါ။
သို့သော် ကျမတို့တစ်ယောက်ကိုတစ်ယောက် ရဲဘော်ရဲဘက်စိတ်အပြည့်နဲ့ သိပ်ချစ်ခင်ခဲ့ကြပါသည်။
သူရော ကျမရော မွေးချင်းငါးယောက်ထဲမှာမှ အငယ်ဆုံးတွေဖြစ်ကြသည်။သူရော၊ကျမရော ကိုယ့်ခြေထောက်ပေါ်ကိုယ်ရပ်ဖို့ ဆန္ဒပြင်းပြခဲ့ကြသူများဖြစ်သည်။
ကုန်ခဲ့တဲ့ ၅ နှစ်တုန်းထဲက ကျမတို့မှာ တူညီသောခံစားချက်များရှိခဲ့သည်ဟု ထင်ပါသည်။ကျမတို့ရဲ့ တူညီသောခံစားချက်ဆိုသည်မှာ လူတွေထင်ထားကြသလို အငယ်ဆုံးဆိုတိုင်း အလိုလိုက်၊အကြိုက်ဆောင်နေခဲ့ရသည်မှာ ၁၀၀ ရာခိုင်နှုန်းမမှန်ပါဘူးဆိုတဲ့ ကလေးအတွေးလေးတစ်ခုမျှသာဖြစ်သည်။
နောက်ထပ်ကျမတို့ကို နှလုံးသွေးချင်းနီးစေသော အချက်ပေါင်းများစွာ ရှိပါသေးသည်။အဲ့ဒိအများကြီးထဲမှာ ၄ နှစ်တက်ရမယ့်ကျောင်းကို တစ်နှစ်ကျော်လာထဲက စိတ်ဝင်စားမှုလျော့နည်းလာတာ၊
ရှေ့ဆက်ရမယ့် ဘ၀ခရီးအတွက် ကျောင်းမပြီးခင် သုံးနှစ်လောက်လိုကထဲက တွေးမိပီးရင်မောလာတာ၊အဲ့ဒိအချက်တွေက ကျမတို့အတွက် နီးစပ်မှုတွေပိုပြီး အားကောင်းစေခဲ့သည်ဟုထင်ပါသည်။
သူသည် တောကတက်လာတဲ့မအူမလည်ကျမကို လူလောကကြီးနှင့် ဆက်သွယ်ပေးခဲ့သူဖြစ်ပါသည်။အထူးသဖြင့် မြို့ပြလို့ဆိုသော်ငြား အင်မတန်မှ သားရဲတိရိ စ္တာန်တွေပေါလှစွာသော ဟောဒီရန်ကုန်မြို့ကြီးမှာ နေတတ်ထိုင်တတ်ရှိလာအောင်၊လူတောတိုးပီး သွားရဲလာရဲရှိလာအောင် ရှေ့ကနေမားမားမတ်မတ်ရပ်ပြီး ဦးဆောင်ပေး၊လမ်းပြပေးခဲ့သူဖြစ်သည်။
လူတွေက နင်ထင်သလောက် မရိုးသားဘူးဟုလဲ ခုချိန်ထိပြောနေဆဲဖြစ်သည်။
သူနှင့်ကျမသည် အသက် 17 နှစ်အရွယ်လောက်ကထဲက လက်ဘက်ရည်ဆိုင်ထိုင်တာကို မက်မောတွယ်တာခဲ့ကြသူများဖြစ်ပါသည်...။လမ်းတကာလှည့်ပြီး ရန်ကုန်မြို့မှာ ရှိသမျှလက်ဘက်ရည်ဆိုင်အားလုံးနီးပါးကို ထိုင်ခဲ့ကြသူများဖြစ်ပါသည်။ဘယ်သူတွေဘယ်လိုမေးငေါ့ပါစေ နေချင်သလိုနေခဲ့ကြသူများလဲဖြစ်သည်။ကိုယ်လုပ်ချင်ရာကို ကိုယ်ရဲရဲရင့်ရင့် လုပ်တတ်အောင် သူကကျမကိုမြှောက်ပင့်ပေးခဲ့သူဖြစ်သည်။ကျမကလဲ အပြန်အလှန်မြှောက်ပင့်ပေးခဲ့ဖူးပါသည်။ခုထိလဲ မြှောက်ပင့်ပေးနေတုန်းပင် ဖြစ်သည်။ကိုယ့်ဆုံးဖြတ်ချက်ကို ကိုယ်တာဝန်ယူရဲတဲ့သတ္တိတွေကို အချင်းချင်းကြားမှာ အပြန်အလှန်မွေးမြူပေးခဲ့ဖြစ်ကြပါသည်။
ဒါတင်မကသေးပါ။သူသည် ကျမကို စာပေအမျိုးအစားအစုံနှင့်ကဗျာတွေကိုပါ ဖတ်တတ်လာအောင်၊အဲ့ဒီစာဖတ်တတ်၊စာချစ်တတ်တဲ့ နှလုံးသွေးတွေနဲ့ နွေးနေအောင်..တနည်းပြောရရင် ကျမတစ်ဘ၀လုံးစာ စာပေကရလာတဲ့ အားအင်တွေ၊သတ္တိတွေနဲ့ နွေးထွေးနေအောင် စတင်မီးပျိုးပေးခဲ့သူလည်းဖြစ်ပါသည်။
သို့သော် သူနဲ့ကျမသည် ဂျူးဝတ္ထုတွေကိုဖတ်ပြီးတိုင်း ဖတ်ဖတ်မောသည်အထိ ငြင်းရခုန်ရတာလဲ ခုချိန်ထိလွန်ခဲ့တဲ့ ၅ နှစ်ကအတိုင်းပင်ဖြစ်ပါသည်။
သူသည် ကျမနှလုံးသားကို သီချင်းတွေနဲ့ နူးညံ့ပျော့ပျောင်းလာအောင်ပြုလုပ်ပေးခဲ့သူလည်း ဖြစ်ပြန်ပါသည်။မှတ်မှတ်ရရ ကျမမှာရှိသမျှ အခွေတွေအားလုံးလိုလိုသည် သူ့လက်ဆောင်တွေချည်းပဲဖြစ်သည်။
၂၀၀၃ ခုနှစ် နိုဝင်ဘာလတုန်းက ၀ိုင်ဝိုင်းရဲ့ အချစ်ငှက်သီချင်းခွေထွက်ပါသည်။နိုဝင်ဘာ ၂၃ ရက်နေ့မှာ ကျမအိမ်မှာ အဲ့ဒိအခွေနဲ့အတူ ခရီးသွားငါးယောက်ရဲ့ဒုတိယခွေရောက်နေခဲ့သည်။
" 4D ရေ နင်နယ်ပြန်တုန်း ပျင်းရင်နားထောင်ဖို့ အခွေတွေလာပေးထားလိုက်တယ်၊ကျေးဇူးနော် :) " ဆိုပြီးရေးထားတဲ့စာရွက်လေးတစ်ရွက်လဲ ပါပါသေးသည်။
အဲ့ဒိတုန်းက ခံစားရတဲ့ ကြည်နူးမှုမျိုး ကျမနှစ်ခါပြန်ခံစားနိုင်ခွင့်ရှိတော့မှာမဟုတ်ပါ။
သို့သော် သူနဲ့ကျမသည် သ်ီချင်း၊အဆိုတော်ကြိုက်ရာမှာလဲ ဘယ်သောအခါမျှ အကြိုက်ချင်းမတူညီကြပြန်ပါ။
ကိုတိုးကြီးကို သူကမကြိုက်၊ထူးအိမ်သင်ကို တစ်ခွေလုံးအစအဆုံးနားထောင်လို့မရဘူးဟု သူကခဏခဏပြောတတ်သလို ကျမကအသွေးအသားထဲကနှစ်သက်သူဖြစ်ပါသည်။
နှုတ်ခမ်းမွေးစစနဲ့ အဲလက်စ်ကို သူကခရေဇီဖြစ်သလောက် ကျမကတော့ပေါ့လျှပ်သည်ဟုဆိုကာ လက်မခံတတ်သူဖြစ်သည်။ခုခေတ်ထွက်နေတဲ့ ဟစ်ဟော့(ပ်)တစ်ချို့ကို သူကလက်ခံပြီး ကျမကတော့ ကြားရရုံနှင့်ကို အော်ဂလီဆန်လာတတ်သူဖြစ်သည်။
စည်းကမ်းတကျနေချင်တဲ့ ကျမနဲ့ ဖြစ်သလိုနေတတ်သောသူ နေ့တိုင်းနီးပါးလဲ ရန်ဖြစ်ကြပါသည်။ကျမက စိတ်ဆိုးဒေါသထွက်လွယ်သလောက် သူကတော့ အင်မတန်မှ အေးဆေးတည်ငြိမ်လွန်းသူဖြစ်သည်။
သူသည် ကျမကို ယခုဒီစာရေးနေသော ဘလောဂ့်ဆိုတာကြီးနဲ့လဲ မိတ်ဆက်ပေးခဲ့သူဖြစ်ပါသည်။သို့သော် သူသည်စာဖတ်သူသက်သက်မျှသာဖြစ်ပါသည်။
ကိုလူသစ်ဘလောဂ့်က စာများအားလုံးကိုတစ်လုံးမကျန် အရည်ကြိုသောက်ထားသူလဲဖြစ်ပါသည်။ကိုအောင်သာငယ့် ကဗျာတွေကို ရူးသွပ်ပြီး ကိုကောင်းကင်ကို ကဗျာတွေကို ခွင့်ပြူချက်နဲ့ စုထားချင်သည်ဟုလဲ ခဏခဏပြောပါသည်။ကျမဘလောဂ့်ကိုတော့ တစ်ပတ်နေလို့မှ တစ်ခါတောင်လာလည်တဲ့သူတော့ မဟုတ်ပါ။
နောက်ပီး ကျမရေးထားခဲ့သမျှ စာတွေထဲမှာ တောင်ကြီးသွားတဲ့ဓာတ်ပုံတွေပါတဲ့ပိုစ့်က လွဲရင်ဘာကိုမှ အားမရဘူးလို့လဲ အားပေးတတ်ပါသည် :(
သူသည် ကျမကိုစာရေးဖို့ လွန်ခဲ့သော ၅ နှစ်ကျော်ထဲကအတိုင်းခုလဲ အားပေးနေဆဲပါပဲ။သူရဲ့ အထောက်အပံ့သော်မှ မရရှိခဲ့ပါလျှင် ကျမရဲ့ ယခုလိုဘလောဂ့်ပေါ်မှာ စာရေးခြင်းဆိုတဲ့ကိစ္စတစ်ခုလဲဖြစ်လာခဲ့မှာ မဟုတ်လို့ ကျမရဲရဲကြီးယုံပါသည်။
ဧရာဝတီတိုင်းမှာနေပြီး ဇာတိမြို့နဲ့ ပုသိမ်ကလွဲလို့ တခြားဘယ်မှမရောက်ဖူးသော ကျမကို မွေးနေ့လက်ဆောင်အဖြစ် ချောင်းသာခရီးကို ကျမဘ၀မှာပထမဆုံးခရီးအဖြစ် သူမကစီစဉ်ပေးခဲ့ပါသည်။
(အဲ့ဒိတုန်းက ကျမအသက် ၁၉ နှစ်ပြည့်လက်ဆောင်ဖြစ်ပါသည်။)
ခု သူ့ ၂၄ နှစ်ပြည့်မွေးနေ့မှာ ကျမက ဒီစာကိုရေးပီး အလွမ်းဖြေနေမိပါသည်။သူ့အတွက် မွေးနေ့လက်ဆောင်ဟု ကျမဘာသာကျမယူဆပါသည်။
posted by mirror time 4:26 PM 11 comments
ဒါလဲကျမရန်ကုန်ကို ပြန်ခါနီးဖြစ်နေတော့ မကောင်းတတ်ပါဘူးလေဆိုပီးလိုက်သွားခဲ့တာပါ...။
သူတို့အိမ်လေးက နတ်မောက်မြို့ရဲ့အောက်ချိုင်းလို့သူတို့အခေါ် ခပ်နိမ့်နိမ့်အပိုင်းမှာရှိပါတယ်။
သူတို့အိမ်လေးကိုလိုက်သွားနေရင်းကမှ ကျမဟာ တန်ဖိုးရှိတဲ့အချိန်တွေကို အိုင်ပေါ့ဒ်တစ်လုံးနဲ့၊ဒါမှမဟုတ် ဂျာနယ်တစ်စောင်နဲ့၊အလုပ်ရဲ့ မရိုးနိုင်သောအရှုပ်ထုပ်ဇာတ်လမ်းတွေနဲ့ကြားမှာ
ကုန်ဆုံးဖြုန်းတီးပစ်ခဲ့မိတာပါလားလို့ နောင်တအတွေးတွေဝင်မိတယ်...။ရောက်ခဲ့တဲ့ တစ်ခေါက်ကလဲ ကျမနတ်မောက်မြို့ကိုဘယ်တော့မှမမေ့နိုင်တော့လောက်အောင် ခံစားမှုတွေ တစ်ထွေးကြီးပိုက်ပြီး
သာယာလိုက်တာ....သွားရာလမ်းတစ်လျှောက်ရော...သူတို့အိမ်လေးကရော...(ကြားဖြတ်ပြီး တစ်ခုငိုပြချင်ပါသေးတယ်..။အဲ့ဒိအိမ်ကို သွားရာလမ်းတစ်လျှောက်လုံးမှာ တွေ့ရမြင်ရသမျှရိုက်ခဲ့တဲ့
ဓာတ်ပုံတွေကို ကျမရဲ့သူငယ်ချင်းရဲ့ကွန်ပြူတာမှာသိမ်းထားရင်းက အဲ့ကွန်ပြူတာက၀င်းဒိုးကျတယ်ထင်ပါ့..
ကိုယ်ရိုက်ထားတဲ့ပုံလေးတွေဆိုတော့လဲ ခင်တွယ်တာပေါ့လေ...။ပြန်ကြိုးစားကြည့်လို့ အဆင်ပြေရင်တော့ အဲ့ဒိဓာတ်ပုံတွေတင်ပါဦးမယ်....။)
သိပ်ကိုအေးချမ်းတဲ့အိမ်လေးကို ကျမရောက်ခဲ့ဖူးပါတယ်...။အိမ်တစ်ခုလုံးကို သစ်နဲ့ဝါးနဲ့ချည်းပဲ ဆောက်ထားပါတယ်..။တိုင်တွေကသစ်နဲ့..အကာမှန်သမျှ ၀ါးထရံတွေနဲ့ ကာရံထားတယ်...။
အိမ်ရဲ့အနံ့ကလဲ ၀ါးနံ့နဲ့ ခြံထဲက မြေသင်းနံ့လေးတွေက ရောပြီး သင်းနေတာပဲ။
အဆောင်အယောင်ရယ်လို့ ဘာမှမရှိ၊စီးပွားရေးလုပ်ငန်းက ပန်းစိုက်ပျိုးရေး၊အဓိကထားစိုက်တာက စံပယ်ပန်း....။စံပယ်တွေကို ညနေစောင်းလောက်ကထဲက ခူးပြီးသီရတယ်။ညရောက်တာနဲ့ အိမ်တွေကို လိုက်ပို့၊ဆိုင်တွေကို လိုက်ပို့နဲ့ သူတို့အလုပ်ကလဲ သိပ်ပြီး အားလှတယ်တော့မဟုတ်ဘူး။တစ်နေ့ကို စံပယ်ပန်းရောင်းရငွေက ၄၀၀၀ ကျပ်အနည်းဆုံးရတယ်လို့ ပြောပြတယ်..။
ဆိုတော့ တွေးကြည့်ပေါ့..။တစ်ကုံးကိုမှ ၂၀ ပဲရတဲ့စံပယ်ကို ၄၀၀၀ ဖိုးလောက်ရတဲ့အထိဆိုတော့ ဘယ်လောက်များ စံပယ်တွေနဲ့ သင်းထုံနေလိမ့်မလဲ...။အဲ့ဒိ စံပယ်တွေဝေနေတဲ့ ခြံထဲမှာ ကျမ သုံးနာရီလောက်ကြာအောင် နေခဲ့တယ်..။ဆောင်းအေးအေးမှာ ဓာတ်ပုံတွေလဲ တစ်ဝကြီး ရိုက်ဖြစ်တယ်..။အဲ့ဒိထဲကမှ ဘယ်တော့မှမမေ့တဲ့ပုံတစ်ပုံကို ပြန်တင်လိုက်ပါတယ်...။
သူငယ်ချင်းရဲ့ အစ်ကိုအကြီး၊ဂီတာတီးအရမ်းကျွမ်းတဲ့အစ်ကိုကြီးဆွဲထားတဲ့ ပန်းချီပါ။ဒီပုံမျိုးဓာတ်ပုံတွေလဲ တွေ့ဖူးပါတယ်...။ဒါပေမယ့် ပတ်ဝန်းကျင် ပြောင်းလဲမှုကြောင့်ပဲထင်ပါတယ်...။
ကျမစိတ်အာရုံမှာဒီပန်းချီရယ်၊ဒီအိမ်လေးရယ်..၊သူတို့မြို့လေးရယ်ကို ခွဲမရပဲ တွဲပြီးပဲ မြင်နေမိပါတယ်...။ဒီပန်းချီက သူတို့အိမ်ရဲ့ အိမ်ဦးခန်းမှာ ချိတ်ထားတဲ့ပန်းချီကားပါ...။
ရေးနေရင်းက ကျမလွမ်းနေမိတယ်...အဲ့ဒိမြို့လေးကို...သူတို့မြို့ရဲ့ ပြယုဒ်လေးတွေကိုလဲ ပြန်သတိရနေမိတယ်..။
ရေဒီယိုကို မီဒီယာတစ်ခုလိုသဘောပိုက် တန်ဖိုးထားပြီး ဖွင့်တဲ့မြို့၊ရေဒီယိုကို အိမ်တိုင်းလိုလိုဖွင့်တဲ့မြို့၊ဗိုလ်ချုပ်အကြောင်းကိုဆို မနားတမ်းပြောပြချင်တဲ့သူတွေရှိတဲ့မြို့၊ရိုးသားမှုတွေ အစင်းသားတွေ့နိုင်တဲ့မြို့...........။
ကျမအဲ့ဒိမြို့လေးကို၊အဲ့ဒိမြို့မှာ ကြုံခဲ့ရတဲ့ဆောင်းကို သိပ်သတိရနေမိတယ်..။
posted by mirror time 4:11 PM 10 comments
ဘလောဂ့်ကို ကိုယ်ပြင်ချင်တာတွေ စိတ်ထင်တိုင်းလျှောက်ပြင်ပြီးတော့ စိတ်တိုင်းလဲသိပ်မကျတာနဲ့ ပိုစ့်တစ်ခုလောက်တော့ တင်ဦးမယ်လို့စိတ်ကူးရပါတယ်။
ကော်နက်ရှင်ကလဲ မဆိုသလောက်လေးကောင်းနေတာဆိုတော့ စိတ်ကလေးလဲ ကြည်နေတာနဲ့ အချစ်အကြောင်းရေးထားတဲ့ ကဗျာလေးတစ်ပုဒ်တင်မယ်လို့ စိတ်ကူးရတယ်..။
ဒါပေမယ့် အနှောက်အယှက်က ၀င်တာပါတယ်။ပြဿနာဆိုတာ တောင်ကြီးသွားတုန်းက ကားပေါ်မှာကြည့်ခဲ့တဲ့ ဗွီဒီယိုကားထဲမှာ ရန်အောင်ပြောသလိုဖြစ်နေလားမသိပါဘူး၊ပြဿနာဆိုတာ မီးပွိုင့်ကလွှတ်တဲ့ကားလိုပဲ ဘယ်တော့မှ တစ်ခုထဲမလာဘူး၊အပြုံလိုက်လာတယ်တဲ့။ခုလဲပြဿနာတော့မဟုတ်ပေမယ့် အဲ့လိုမျိုးဖြစ်တယ်ထင်ပါ့။ကျမက ပိုစ့်တင်းဆိုတာကို ကလစ်ရုံပဲရှိသေးတယ်။ကျမဘေးနားကွန်ပြူတာကိုသုံးနေတဲ့ ကောင်မလေးတစ်ယောက်ရဲ့စကားသံကနားမခံသာလောက်အောင်ထိကို ဆူညံပြီးတော့ကို ၀င်လာတော့တာပါ။
အသံကျယ်တာကိုပြောတာ မဟုတ်ဘူးနော်။ကျမကိုယ်တိုင် နားလေးပြီး စကားကိုဆို အာကျယ် အာကျယ်နဲ့စကားပြောတတ်လို့လား မသိဘူး။အသံကျယ်တာကိုဘယ်တုန်းကမှ နားမညည်းခဲ့ပါဘူး။ဒါပေသိ သူ့အသံကတော့ အတော်လေးကို စိတ်ကသိကအောက်ဖြစ်ရတာပါ။
အပြင်ရောက်နေတဲ့ သူ့ရည်းစားကောင်လေးနဲ့ ချစ်သူတို့ဘာသာဘာဝ ချစ်တင်းနှောတဲံ့ စကားပြောနေကြတာထင်ပါတယ်။အဲ့ဒိတော့ စဉ်းစားသာကြည့်ကြပါတော့။တိုးတိုးတိတ်တိတ် ရင်ခုန်ပြီးပြောရမယ့်စကားကို မယ်မင်းကြီးမကတော့ ပေ 60၊ပေ 100လောက်ရှိတဲ့ အခန်းတစ်ခန်းလုံးရှိသမျှလူတွေအကုန်လုံးကြားတဲ့အထိကို အော်ပြောနေတော့တာ။
သူရှက်မရှက်တော့ မသိပါဘူး၊ဘေးနားက ကျမကမျက်နှာတွေပူလာလိုက်တာ။မြန်မာအမျိုးသမီးတွေ၊မြန်မာ့ယဉ်ကျေးမှုတွေ ခဏထားလိုက်ပါဦး၊ကိုယ့်ဖြစ်ကြောင်းကုန်စင်ကို ကိုယ့်ပါးစပ်ကနေ အရသာရှိရှိနဲ့ ပြန်ပြောနေတာကို ကျမပါးစပ်ဟောင်းသားနဲ့အမှတ်တမဲ့ ငေးကြည့်မိတဲ့အထိတောင်ဖြစ်ရပါတယ်။
ထူးဆန်းရုံတင်မဟုတ်ပါဘူး။မြန်မာပြည်က လူငယ်တွေရဲ့ တော်တော်များများရာခိုင်နှုန်းဟာ အင်တာနက်ကို ဘယ်လိုသဘောထားနေလဲ ဆိုတာတွေအထိပါတွေးမိပြီးတော်တော်လေးလဲ စိတ်မကောင်းဖြစ်မိပါတယ်။
ခါတိုင်းလဲ ခုလိုပဲ အင်တာနက်ဆိုင်တွေမှာ ကိုယ့်ဘေးနားကလူတွေစကားပြောနေကြတာတွေ ကျမကြုံဖူးပါတယ်။နေ့တိုင်းနီးပါး ကြုံနေရတာဆိုတော့လဲ ဒါကိုအဆန်းလုပ်မနေနိုင်တော့ပါဘူး။နေတတ်အောင်သာ နေရတော့တာပါပဲ။
ဒီခေတ်ဒီအခါကြီးက ဒီလိုတွေဖြစ်လာနေမှတော့ ကိုယ်ကလိုက်ပီးမစီးမျောနိုင်ရင် ကိုယ်ကဘေးရောက်တတ်သလိုဖြစ်နေတယ်လေ။
ဒိထက်ပိုပြီး စိတ်ဆင်းရဲစရာကောင်းတာတစ်ခုက ၊စိတ်ဆင်းရဲစရာဆိုတာထက် ဒီခံစားမှုအပြီးမှာတော့ ကျမအာရုံထဲဝင်လာတဲ့ အတွေးတစ်စပါလေ။ဘာလဲဆိုတော့ ငါဟာင့ါမြို့ကို လေးနက်စွာ သံယောဇဉ်ကြီးနေမိပါလားဆိုတဲ့အတွေးပါ။
သံယောဇဉ်တွေမထားချင်လွန်းလို့ ဖြစ်နိုင်ရင် တစ်ယောက်ထဲမဟုတ်ဘူး၊တစ်ခြမ်းထဲပဲနေချင်တယ်လို့အထိကြွေးကြော်ထားခဲ့ဖူးတာလဲ ကျမပါပဲ။ရန်ကုန်မှာပဲ ဘယ်လောက်စိတ်ညစ်ညစ်ပေကပ်သပ်နေတတ်ပြီး အိမ်ကဖုန်းဆက်ပြီး ခေါ်လွန်းမကခေါ်မှ တစ်ခေါက်ကိုတောင်အနိုင်နိုင်ပြန်တတ်တဲ့ ကျမစိတ်ထဲမှာ ဘယ်အချိန်ထဲကအဲ့ဒိသံယောဇဉ်ကြီး ရောက်နေခဲ့သလဲ ကျမမခန့်မှန်းတတ်ပါဘူး။ဒီခံစားမှုကိုအရင်တစ်ခါတုန်းကလဲ ခံစာဖူးပြီးပါပြီ။
အဲ့ဒိတုန်းက မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ နာမည်ကြီး Company တစ်ခုရဲ့ ပိုင်ရှင်တစ်ဦးက လုပ်ချင်ရာလုပ်နေတာတွေ၊နောက်ပြီးသူ့ဇာတိက ဘယ်က၊ဘယ်လို...စတာတွေကြားရတော့အံမယ်လေးလေးလေး ရင်နာလို့မဆုံးပါဘူး။
ကိုယ့်ကိုယ်ကိုဘယ်လိုဖြေရမယ်မှန်းလဲမသိပါဘူး။ငါ့မြို့ကလူကလေ.....ဒီလိုကြီးပါလား ဆိုတဲ့အတွေးနဲ့တင် တစ်ယောက်ထဲ ကြိတ်ရှက်နေရခဲ့ဖူးသေးတယ်။
ခုဒုတိယတစ်ခါဆိုတော့ ပိုသေချာသွားပါတယ်။အဲ့ဒိမိန်းကလေးကလဲ ကျမဇာတိမြို့ကပါ။သူ့ကိုလှည့်မကြည့်ပဲနေရင်းက သူ့ရှေ့ကမှန်ထဲမှာ(ကျမကိုလဲသူအဲ့လိုမြင်နိုင်တယ်)ကျမသူ့ကိုတွေ့လိုက်ရတယ်။ဘုရား၊ဘုရား.ကျမလေစောစောကဖြစ်နေတဲ့
အရှက်ထက်ပိုခံစားရပါတယ်။ကိုယ်ကလဲ တမ်းပလိတ်ကိုကလိချင်တိုင်း ကလိထားတာဆိုတော့ လတ်စကလဲသတ်မရသေးတော့ သူ့အသံကိုတော်တော်လေးသည်းခံပြီးတော့ကို နားဒုက္ခကိုခံစားလိုက်ရပါတယ်။ဒါနဲ့ အဲ့ဒိကောင်မလေးပြီးခါနီးတော့ ကျမကြိတ်ပြီးဆုတောင်နေမိသေးတယ်။ဘုရားသိကြားမလို့ ငါ့ လာနှုတ်မဆက်ပါစေနဲ့လို့လေ။
သူတကာတွေလို ငါတို့မြို့က ဘယ်သူက၊ဘယ်သို့ဘယ်ပုံ ပြောစရာလူရယ်လို့ ကျမတို့မြို့မှာ မရှိပါဘူး။
နတ်မောက်မှာအလုပ်သွားလုပ်တုန်းကဆို အဲ့ဒိကသူငယ်ချင်းတွေက သူတို့ကိုသူတို့ ဗိုလ်ချုပ်မြို့ က၊ဗိုလ်ချုပ်မြို့ ကနဲ့ သိပ်ပြီးဂုဏ်ယူပြီးပြောကြတာတွေ၊နောက်ပြီး ပြည်က အစ်ကိုတော်များရဲ့ ခင်ဝမ်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ ယုံကြည်ကြည်နူးရဲရင့်မှုတွေ...
ဆရာကြီး ဘိုကလေးဦးတင့်အောင်၊ဆရာ ဒဂုံတာရာ၊ဒေါက်တာသန်းထွန်း စသဖြင့်ဂုဏ်ယူရတဲ့ ဧရာဝတီတိုင်းကဆရာကြီးတွေ....။
ကျမလဲ အဲ့လိုလေးတွေ ခံစားချင်လိုက်တာ.............။
posted by mirror time 1:57 PM 8 comments
ဒါပေမယ့် ကိုဆောင်းယွန်းလကြီးလာအော်ခဲ့တာတွေ့ကထဲက ဒီနာမည်တပ်မည်လို့စိတ်ကူးပေါ်တာနဲ့
တခြားစဉ်းစားမနေတော့ပဲ ဒီလိုလေးပဲ တပ်လိုက်ပါတယ်..........။
ကိုယ့်ကိုယ်ကိုမုန်းတဲ့ အမုန်းစာရင်းကလဲ များတော့များသား၊
အဲ..ဒါပေမယ့် သူတစ်ပါးကိုတော့ မမုန်းတတ်ပါဘူး။မမုန်းတတ်တဲ့အပြင် ခင်တတ်လွန်းလို့တောင်
ကဲ အဲ့ဒိတော့ ခင်တတ်လွန်းတာကနေပဲ စလိုက်တော့မယ်။
၁ ) ခင်မိပြီဟေ့ဆို....အမုန်းကို ခင်တာ
ဟုတ်ကဲ့ ကျမကလူတွေကို အရမ်းခင်တတ်ပါတယ်..။
ဒါပေမယ့် တွေ့တဲ့လူ ဖမ်းခင်လိုက်တာမျိုးတော့မဟုတ်ပါဘူး။
ကျမစိတ်ထဲမှာ ခွဲခြားပိုင်းခြားထားပါတယ်......။လူတိုင်းကို မခင်တတ်သလို ခင်မိပြီဆိုရင်လဲ ရဲဘော်လိုပေါင်းချင်တာပါ။ခင်လို့ သွေးရင်းသားရင်းစိတ်၊ရဲဘော်ရဲဘက်စိတ်ပါ တကယ်ပါလာပြီဆိုရင်တော့ ပြောမိ၊ဆိုမိတွေအထိဖြစ်တတ်ပါတယ်...။အဲ့ဒိအခါမျိုးကျတော့ အပြောခံရတဲ့လူက အခန့်မသင့်ရင် ပြဿနာတွေကဖြစ်လာတတ်ပါတယ်...။ဒါကြောင့် ကိုယ့်ကိုယ်ကို မုန်းပါတယ်..။
၂ ) တွေဝေခြင်း
ကျမ Profile မှာကိုပဲ တင်ထားပါတယ်...။
ကိုယ့်ဆုံးဖြတ်ချက်ကို ကိုယ်တာဝန်ယူချင်တာကြောင့်လဲ ပါတယ်..ကိုယ့်ဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့ကိုယ် ကိုယ်ဖြစ်ကိုယ်ခံသဘောထားပြီးတွေဝေလွန်းလှပါတယ်...။မကောင်းမှန်းသိတယ်...။ဒါပေမယ့် အဲ့ဒိတွေဝေစဉ်းစားငေးမောပြီးမှ ရလာတတ်တဲ့အဖြေကိုပဲ သဘောကျနေတတ်တယ်..။
၃ ) ဒေါသကြီးလွန်းခြင်း
လူတိုင်းနဲ့တော့ မဟုတ်ပေမယ့် ကျမက ကျမနိုင်လို့ရတဲ့လူတွေနဲ့ဆို အင်မတန်ဒေါသကြီးပါတယ်...။
၀ူးဆို ဒိုင်းကနဲ၊ထစ်ဆို ဗြစ်ခနဲ ဆိုတဲ့လူစားမျိုးထဲကပါ...။
(ကျမအစ်ကိုက အမေ့ကိုခဏ ခဏပြောတဲ့စကားရှိတယ် အမေသမီးမွေးထားလို့တဲ့ သားသာဆို ဂတ်တဲသွားရတာနဲ့ ချောင်းပေါက်မယ်တဲ့ ...)
ဒါပေမယ့် ချက်ချင်းဒေါသကလဲ ပြယ်တတ်ပါသေးတယ်..။ကောက်ရိုးမီးဒေါသလေ..။
အဲ့ခါကျတော့မှ ကိုယ်ဒေါသဖြစ်ခဲ့တာက ရှက်စရာဖြစ်ဖြစ်နေတတ်တယ်...။
၄ ) စိတ်မရှည်တတ်တာ
အပေါ်က ဒေါသကြီးတယ်ဆိုတာကို နံပါတ်တွေများသွားအောင် ခွဲထုတ်လိုက်တာ.....:P
ဒေါသကြီးတယ် ဆိုတာကလဲ စိတ်မရှည်တတ်လို့ပဲ ထင်ပါတယ်...။
" ပြောတဲ့သူပြီးပြီ လုပ်တဲ့သူမပြီးသေးဘူးလား" ...ဆိုတဲ့လူမျိုးပါ..။ကိုယ်တိုင်လဲ စိတ်ကတအားမြန်သလို သူတကာကိုလဲ
စိတ်မရှည်တတ်ပါဘူး။ဒါကိုလဲ မကောင်းမှန်းသိရက်နဲ့ မပြင်နိုင်လို့ မုန်းတယ်...။
၅ ) ကိုယ်တတ်သလောက်၊ကိုယ်သိသလောက်လေးကို သူများကိုသိစေချင်တာ
ဒီတစ်ခုကတော့ အထူးသဖြင့် ကျမနဲ့လက်ပွန်းတတီးနေနေတဲ့ သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ဆို ပိုဖြစ်တတ်ပါတယ်...။
ဒီနေ့ ဘယ်သူဘလောဂ့်ကို ငါသွားဖတ်တော့ သူရေးတာဟာ...ဘယ်လိုကောင်းတာ..၊
နောက်ရှိသေးတယ်...ဖတ်ပြီးသမျှ စာအုပ်တွေ၊ဂျာနယ်တွေ ထဲက သူတို့မဖတ်ရသေးတာတွေကိုဆို နားထောင်ချင်သလား၊နားမထောင်ချင်သလား မစဉ်းစားပဲ နင်းကန်ပြောပြတတ်တာ..
ဒါကိုလဲ ဘယ်သူကမှ သတိပေးစရာမလိုပဲ မကောင်းမှန်းသိရက်နဲ့ မပြင်နိုင်သေးတာ.....မို့
၆ ) စကားများတာ
ခုရေးနေတာတွေကိုပဲ ကြည့်ပါဦး၊စကားများလား၊မများလား ခန့်မှန်းလို့ရလောက်ပြီထင်ပါရဲ့...။
ရ ) သိချင်တတ်ချင်စိတ်များတာ
အမှတ်တမဲ့ဆိုရင်တော့ ဒါကောင်းတဲ့အချက်ပဲ...။ဘာမုန်းစရာရှိလဲလို့ ထင်စရာပဲ..။
ဒါပေမယ့် ဒီစိတ်ကြီးနဲ့ အမြဲနေနေရသူဆိုရင်တော့ ဒါမုန်းစရာပါ..။
၈ ) ပစ္စည်းကောင်းမက်တာ
မသုံးရရင်နေပါစေ...သုံးမယ်ဆိုရင်တော့ ကောင်းမှသုံးချင်တဲ့ အကျင့်ဆိုးပါ..။
သူငယ်ချင်းတွေက ထောမနာပြုပါတယ်...ဘန်းစကားနဲ့ Miss Branded တဲ့....
ပိုက်ဆံလဲ ကုန်တယ်...စိတ်မထားတတ်တဲ့အခါမျိုးဆို ပင်ပန်းတတ်တယ်...ဒါလဲ စာရင်းထဲထည့်လိုက်တယ်..။
၉ ) အရာရာကို စနစ်တကျ ရှိစေချင်တာ
စည်းနဲ့ကမ်းနဲ့ စနစ်တကျတွေ ဖြစ်စေချင်တာ....၊ဖြစ်စေချင်တော့ လိုက်လုပ်၊လိုက်လုပ်တော့ ပင်ပန်း၊
ဒီကြားထဲ စည်းကမ်းမရှိသူနဲ့ဆို ဒေါသကထွက်ရသေး..။ဒီအတွက်ကြောင့် အဲ့ဒိအကျင့်ကိုလဲ မုန်းတယ်...။
၁၀ ) အားနာတတ်ခြင်း
တစ်ခုခုဆို ကျမပါးစပ်က အရင်ဆုံးထွက်လာတတ်တာ အားနာလို့ဆိုတဲ့ စကားပါ။
အတူနေတဲ့ သူငယ်ချင်းနဲ့ဆို အဲ့ဒိကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီး ရန်ဖြစ်ရတာ တစ်ကျက်ကျက်ပါပဲ၊
အားနာပြီး ပိုက်ဆံချေးလိုက်တာ၊အားနာပြီး ကိုယ်နဲ့လဲ သိပ်မရင်းနှီးတဲ့သူကို တစ်နေကုန်တစ်နေကမ်း အဖော်ပြုပေးနေတာ၊အားနာပြီး အပေါင်းအသင်းလုပ်မိတာ၊အားနာပြီး ကားခကိုမဆစ်တာ...အများကြီးပါပဲ...။
ခုလဲ ကိုဆောင်းယွန်းကြီးကို အားနာပြီး ဖြေလိုက်တာမှ စာကိုအရှည်ကြီးပဲ..အဟဲ အလကားနောက်တာ...။
အမုန်းစာရင်းတွေကတော့ ဒီလောက်ပါပဲ...ရေးရင်းကလဲ လည်နေပြီ..။
တော်ကြာဖတ်ရင်း ဖတ်ရင်းနဲ့ အပေါင်းအသင်းမလုပ်ချင်တော့အောင်ဖြစ်လာမှာ စိုးလို့ပါ..။
စိတ်ထဲရှိသလို ရေးထားတာဖြစ်လို့ သည်းခံပြီးတော့ပဲ ဖတ်ပေးကြပါ..။
မှတ်ချက်။ ။သူများတဂ်တော့ကိုယ်လဲ တဂ်ချင်တာပေါ့လေ...။မှုတ်ဖူးလား။
၁ )ကိုငြိမ်းစု ( ဒီတစ်ခါနဲ့ဆို2ခါရှိပြီ တဂ်တာ...မဖြေရင် အပေါင်းအသင်းမလုပ်တော့ဘူး)
၂ ) မြို့တက်ပြီး လူလည်ကြီးလုပ်နေတဲ့ တောကျောင်းဆရာ
၃ ) အစ်မ ယောနသံစင်ရော်
၄ ) အစ်ကိုကြီး ကိုအောင် (မနေ့ထဲက တစ်ယောက်ကျန်သေးပါတယ်..စိတ်ထဲမှာထင်နေတာ မေ့ကျန်ခဲ့တာစိတ်မဆိုးဘူးဆို ရေးပေးနော် )
posted by mirror time 9:01 PM5comments
ပြောချင်ရာပြောထားပြီး ဘာမှလဲမဟုတ်လို့ထင်ချင်လဲ ထင်ကြပါတော့လေ..။
အိမ်မှာပဲ ကွေးနေမိတယ်..။အားတဲ့အခါ ဘလောဂ့်တွေလည်တယ်..။
သ်ီချင်းခွေတွေ ၀ယ်ဖြစ်တယ်..။ဘိုဖြူရဲ့ ဆန်ရေ၊မာရဇ္ဖရဲ့ 12 " = 1 ' ဆိုတဲ့ခွေ၊
လေးဖြူ၊အငဲ၊မျိုးကြီးတို့ ရဲ့ LMN အခွေ...အဲ့ဒါတွေ နားထောင်ဖြစ်တယ်..။
(သီချင်းတင်ပုံတင်နည်းတွေ လေ့လာနေပါတယ်...နည်းပညာအား အင်မတန်နည်းပါတယ်
ဘလောဂ့်ပေါ်ခြေချတာ3လကျော်တဲ့အထိ သ်ီချင်းမတင်တတ်သေးပါဘူး..သိတဲ့လူတွေပြောပြသွားရင်တော့
အထူးကျေးဇူးတင်မယ်(ပါ့)ပ :) ...)
ကြည်အေးရဲ့ ကျမပညာသည် ဖတ်ဖြစ်တယ်..။
ကျွန်တော်မတတ်နိုင်သော ကမ္ဘာလောကကြီးထဲသို့ ရောက်ခဲ့သည်
ကျွန်တော် တတ်နိုင်သလောက် ကြိုးစားခဲ့မိသည်။
I've come toaworld I can't help much
I've strived as much as I can.
(သုခမိန်လှိုင်..အင်ဒီဝါးဟိုလ်းတို့ ကမ္ဘာ ကဗျာစာအုပ်)
ဆားချက်တယ်လို့ပဲပြောပြော လက်ရှိစိတ်ခံစားမှုနဲ့တော့ တစ်ထပ်ထဲကျနေပါတယ်
posted by mirror time 7:08 PM5comments
၁ ) ရဟန်းဝတ်ဖူးရမယ်
၂ ) ပုဂံရောက်ဖူးရမယ်
၃ ) ဇာတ်ပွဲ ကြည့်ဖူးရမယ်..
အဲ့ဒိစာပါထည့်သွင်း ကြေငြာထားတဲ့ ဇာတ်မင်းသားလေးဖိုးချစ်ရဲ့
ကန်တော်ကြီး မျှော်စင်ကျွန်းမှာ ဒီဇင်ဘာ ၄၊၅၊၆ ရက်နေ့များမှာ မိုးအလင်းကပြမယ့်
ဒုတိယနေ့ ကြည့်မယ်လို့တော့ စိတ်ကူးထားတယ်...
ဒုတိယနေ့ကို ဘာလို့ရွေးရတာလဲဆိုတော့ အကြောင်းရှိတယ်..
ပထမနေ့ဆို ဇာတ်က အခင်းအကျင်း၊အပြင်အဆင်မှ အစပေါ့
စပြီး ပြင်တုန်း၊ဆင်တုန်းပဲရှိသေးတော့ သိပ်ပြီးအဆင်မပြေလောက်သေးဘူးလို့
ဖိုးချစ်လို နိုင်ငံကျော် ပြည်သူချစ်ဇာတ်မင်းသားလေးကတော့
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ပထမဆုံးနေ့မှာ ဇာတ်အဖွဲ့ဝင်တွေရဲ့ အာရုံဝင်စားမှုလဲ
အားမကောင်းသေးတော့ ခါတိုင်းဆို ကြည့်ရတာ သိပ်ကိုအားရခဲ့တယ်မရှိလှဘူး၊
တတိယနေ့ကျတော့လဲ နောက်ဆုံးနေ့ဆိုတော့ သိမ်းချင်နေကြတာနဲ့
ဒါကြောင့် ဒုတိယနေ့ကို ကြည့်မယ်လို့ ရွေးထားပါတယ်....
ဖျာလက်မှတ်က ရှေ့ဆုံးတန်းကနေ နောက်ထိ....
17000 ကျပ်၊15000 ကျပ်၊10000 ကျပ်လို့ သတ်မှတ်ထားပါတယ်..။
ထိုင်ခုံနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ တစ်ခုံကို 2500 ပါ၊ရုံဝင်ကြေးက တစ်ဦးကို 2000 ကျပ်ပါတဲ့....။
ဖျာလက်မှတ်က နဲနဲတော့ဈေးကြီးတယ် ထင်တာပဲ....ဒါပေမယ့်
ဇာတ်ဆိုတာ ဖျာနဲ့ကြည့်မှ အရသာတကယ်ရှိတာနော်...။
ဆိုတော့ကာ.......ဒီဇင်ဘာ ၆ ရက်နေ့ည၊ကန်တော်ကြီးမျှော်စင်ကျွန်းမှာ မင်းသားလေးဖိုးချစ်တစ်ယောက်...
သူပြောခဲ့သလို မြို့တော်ရန်ကုန်နဲ့ မြန်မာ့ ဇာတ်သဘင်အနုပညာ အလှမ်းဝေးသွားမှာစိုးလို့
ကဖို့ စီစဉ်ဖြစ်တာပါ ဆိုတဲ့အတိုင်း ဘာတွေများတင်ဆက်ဦးလေမလဲလို့ ကျမသွားကြည့်ပါဦးမယ်...။
posted by mirror time 11:31 AM9comments
သေသေချာချာ ကြိုးစားပြီး ဖတ်ဖြစ်တာက ချယ်ရီ ဒီဇင်ဘာထုတ်ပေါ့...။
လက်ထဲစရောက်လာထဲက ဖတ်လိုက်တာ3 ရက်လောက်ရှိနေပြီ....။
အဲ့ဒိစာအုပ်ထဲက ပြန်လည်ပြောပြချင်လောက်အောင် ဖတ်ဖြစ်ခဲ့တဲ့ စာက
ရသစာပေမှေးမှိန်လာရခြင်းအကြောင်းများကို ဆရာ အောင်သင်း၊ဆရာ လူထုစိန်ဝင်း..နဲ့ နောက်ထပ်ဆရာတစ်ယောက်(ကျမသေချာမမှတ်မိလို့ပါ)တို့ကိုမေးထားတာတွေပါ...
အင်တာဗျုးတဲ့သူကလဲ တကယ့်အနှစ်သာရတွေကိုပဲ ထုတ်မေးတတ်သလို
ဖြေတဲ့ဆရာတွေရဲ့ အဖြေတွေကလဲ ပြည့်စုံလွန်းတော့ သူတို့ သုံးယောက်ရဲ့
အင်တာဗျူးတွေကိုဖတ်လိုက်ရတာဟာ နောက်ထပ်သုံးရက်လောက် ဘာမှမလုပ်ပဲထိုင်ပြီး
စဉ်းစားနေချင်ရလောက်အောင်ကိုပဲ အတွေးတွေပွားစေပါတယ်....။ဗဟုသုတတွေလဲ တနင့်တပိုးရခဲ့ပါတယ်...။
ရသစာပေပြန်လည်နာလန်ထူရေးအတွက် အယ်ဒီတာ၊၀တ္ထုရေး စာရေးဆရာများအပြင်.....
စာဖတ်သူတွေ ဘာလို့စာဖတ်အားနည်းသွားကြတာလဲ ဆိုတာ....
အင်တာနက်တွေ အရမ်းခေတ်စားလာလို့...ဒါ့အပြင် တခြားသောနည်းပညာ entertainment
တွေ လူထုကြားတွင်ကျယ်လာမှု စတာတွေလဲ ပါပါတယ်...ဒါပေမယ့် ဒါကလဲအခိုက်အတန့်ပါပဲတဲ့။
ကျမတို့အတွက်တော့ လိုက်လို့လိုက်လို့အားမရနိုင်အောင် များပြားလွန်းနေတယ်မှုတ်လား။
ကြာလာရင် ရိုးသွားနိုင်တယ်လို့ ကျမတော့ ထင်ပါတယ်...။ဒါကလဲ အခိုက်အတန့်သာ...။
ဒါပေမယ့် နောက်ကျန်နေသေးတဲ့တစ်ချက်ကတော့ အကြောင်းအရာတစ်ခုထဲကိုပဲ
ဒါ့အပြင် စာဖတ်ပရိတ်သတ်တွေဆိုဟာ ရသစာပေတွေမထွက်လာလို့သာ မဖတ်ကြတာပါတဲ့...
မထွက်လာတော့ အခါခါပြန်ပုံနှိပ်နေတဲ့ ဆရာကြီးရွှေဥဒေါင်းတို့၊မဟာဆွေတို့...နတ်နွယ်တို့ စာအုပ်တွေကို
7000 ကျပ်လောက်ထိတောင်ပေးပြီး ဖတ်နေကြတာပါ...တဲ့..
သိပ္ပံနဲ့ဝိဇ္ဖာမှာ သိပ္ပံကလူတွေကိုတိုးတက်စေပြီး ၀ိဇ္ဖာကလူတွေကိုယဉ်ကျေးစေတယ်တဲ့..။
ဒါကြောင့် လူတွေသည် ရသစာပေဖတ်ဖို့လိုအပ်တယ်တဲ့...။
အဓိကကတော့ ရသစာပေပြန်လည်တောက်ပလာရေးအတွက်....အထူးသဖြင့် လူငယ်တွေကိုစင်တင်ပေးဖို့၊
အယ်ဒီတာတွေ ဒီထက်ပိုပြီး အရည်အချင်းပြည့်ဝဖို့၊ပေါ်ပင်တွေချည်းပဲ အားမပေးဖို့...၊
၀တ္ထုရေးဆရာတွေ မယောင်တာဆီမလူးဖို့(၀တ္ထုရေးဆရာတွေက ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဆောင်းပါးတွေ၊အေအိုင်ဒီစက်ရောဂါဆောင်းပါးတွေ
ရေးနေတာကိုလဲ ထောက်ပြပြောဆိုသွားခဲ့ပါတယ်...) စသဖြင့်..
ဘက်စုံဒေါင့်စုံကနေ ဆရာကြီးများက ဆွေးနွေးသွားပေးသွားကြပါတယ်....
(ဒီနေရာမှာ တစ်စုံတစ်ခုသော သဘောထားကွဲလွဲစရာများရှိလာပါက ကျမ၏ပြန်လည်တင်ပြပုံမှားယွင်းခြင်းကြောင့်သာလျှင်ဖြစ်ပါတယ်...)
အဆင်ပြေတဲ့အခါလဲ အင်တာဗျူးအစအဆုံးတင်ဖြစ်မယ်လို့ မျှော်လင့်ပါတယ်..။
ကျမ ဂျာနယ်တွေလဲ ဖတ်ပါတယ်.....။နေ့တိုင်းနီးပါးကို ပိုက်ဆံအကုန်ခံပြီးဝယ်ဖတ်ပါတယ်....။
မြန်မာပြည်မှာ တစ်နေ့ကိုဂျာနယ်စောင်ရေ အနည်းဆုံး 5စောင်ကနေ7စောင်လောက်တော့ ထွက်ပါတယ်...။
သူ့ထက်များချင်သာ များပါလိမ့်မယ်...။အဲ့ဒိထဲမှာ အများဆုံးကတော့ ဘောလုံးဂျာနယ်ပါ...။
ဘောလုံးဂျာနယ်တွေထဲမှာ ဘောလုံးနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ ဘောလုံးပညာရပ်ဆိုင်ရာအကြောင်းအရာများ၊
ကစားပြီးတဲ့ ပွဲရလဒ်များ၊(ပရီးမီးယားလိဂ်ဘောလုံးပွဲများအကြောင်းဆို ပိုမိုစုံလင်ပါသည်)
ဂျာနယ်များလဲ ရှိပါတယ်....အရေအတွက်အားဖြင့်လဲ လက်ချိုးရေလို့ရသပေါ့လေ...။
နောက်ပြီး "တစ်လုံး" လို့ ခုခေတ်လူတွေပြောပြောနေတဲ့ ဘောလုံးပွဲလောင်းဖို့ကြေးအကြောင်းများ...
ပွဲကြို အထောက်အကူပြု....အပေါ်သင်းနိုင် 50 %စား ၊40 % စား စသဖြင့်.....
ဆားဘီးယား တင်းနစ်မယ် ယန်ကိုဗစ်ပုံအပြည့်နဲ့ ဂျာနယ်များလဲ ဖတ်ဖြစ်ပါတယ်....။
အဲ့ဒိထဲကမှ အနုပညာရပ်ဝန်းလေး(ရုပ်ရှင်နဲ့ ဂီတ)အကြောင်းကွက်ပြီး ကျမဖတ်ဖြစ်တာလေးတွေပြောချင်ပါတယ်...။
ကျမတို့ဆီမှာ အရင်တုန်းက အဖွဲ့ဖွဲ့ပြီး သီချင်းဆိုခဲ့တဲ့သူတွေက
ခုခေတ်က အရင်စိုးသူတို့၊ရဲအောင်၊ရန်အောင်တို့လို မင်းသားက အဆိုတော်လုပ်တဲ့ခေတ် မဟုတ်တော့ဘူး၊
အဲ့လို အဆိုတော်ကနေ မင်းသားလုပ်လာကြတာတွေလဲရှိတယ်...။
ပိုက်ဆံချမ်းသာလို့ မိဘကပရိုဂျူဆာ၊ သားက မင်းသား..အဲ့ဒါမျိုးလေးတွေလဲ ရှိတယ်.....။
အမေနဲ့ သားဆိုး(သို့)သိပ်လိမ္မာတဲ့သား ကားတွေနဲ့ ဟာသကားတွေပါ...။
ပြောချင်ရာတွေ ပြောတတ်တဲ့ကျမက မြန်မာကားတွေတော့ မကြည့်ပါဘူး၊
မကြည့်ရတဲ့ အကြောင်းရင်းတွေ အများကြီးရှိပါတယ်...။
ယေဘုယျအကျဆုံးအချက်က ကျမကို ဘယ်လို ရသမှမပေးနိုင်လို့ပါ...။
အဲ့လိုပြောင်းပြန်တွေဖြစ်နေရတဲ့အတွက် ကျမလုံးဝနီးပါးကို မကြည့်ဖြစ်ပါဘူး။
နောက်တစ်ခုရှိတာက ကျမကရုပ်ရှင်ကြည့်တာ ၀ါသနာမပါတာကြောင့်လဲ ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်...။
ဒါပေမယ့် ဒါကိုပရိတ်သတ်ကို အချိုကျွေးတာလို့ ကျမကမသတ်မှတ်ရက်ပါဘူး
သူ့ဘာသာသူ ထုတ်လုပ်သူ၊သရုပ်ဆောင်သူ၊ကြည့်ရှုအားပေးသူ...သူတို့ဘာသာသူတို့ မျှတနေတဲ့၊
သိချင်ရင် ၀ယ်ဖတ် ငွေတစ်မတ်ထဲ....။
နောက်ထပ်ပြောချင်တာက ဂီတအကြောင်းပါ...(အဟဲဟဲ ဆရာမကြီးလေသံက တစ်ပြားမှတော့မလျှော့ပါ)
မြန်မာပြည်မှာ ဂီတအဖွဲ့တွေ အတော်ပေါသလို တစ်ယောက်ထဲရပ်တည်နေကြသူတွေလဲရှိပါတယ်..
ခုနောက်ပိုင်း ခိုးကူးခွေကိစ္စပြဿနာတွေရှိသလို၊နိုင်ငံရေးအကြောင်းဆိုတာကလွဲပြီး ကျန်တာအကုန်ဆင်ဆာပေးနေတဲ့အချိန်အခါမှာတော့
ဘတ်စ်ကားပေါ်မှာ၊စတိုးဆိုင်မှာ၊လက်ဘက်ရည်ဆိုင်မှာ.....စတဲ့ Public Place တွေမှာ မိန်းကလေးတွေ
ဒါလဲ ပေးသူ၊ယူသူမျှတနေကြပုံကျပါတယ်.............ဒါကိုဘယ်သူကမှ အပြန်အလှန်နှုတ်လှန်ထိုးတာမျိုးမကြားရဘူးပါ..။
(ဟိုတစ်လောကတော့ ကောင်မလေးနှစ်ယောက်ဆိုတဲ့သီချင်းတစ်ပုဒ်မှာ မိန်းမတွေငွေမက်တဲ့အကြောင်းကလွဲရင်
တခြားဘာတွေရေးနိုင်လဲ ဆိုတာမျိုးတော့ ကြားဖူးပါတယ်...)
အဲ့ဒိမြစ်ထဲကလူတွေကလဲ စာမျက်နှာပေါ်တက်ပြီး မိန်းမတွေကဘာ၊မိန်းမတွေကဘယ်လို၊ပရိတ်သတ်က သိပ်အများကြီး
ဒီတစ်ခါတော့ ကျမလွှတ်မချတော့ပါဘူး....၊ဘာလုပ်လိုက်ရမှန်းမသိလို့ သိမ်းထားလိုက်တယ်..............။
posted by mirror time 4:11 PM6comments
ဘာမှလုပ်မရတဲ့အကြောင်းနဲ့ အရည်ညှစ်ထုတ်ထားခဲ့သော ပို...